Nezvedu - Beijing KES Biology Technology Co., Ltd.
Beijing KES Biology Technology Co, Ltd. ndiyo inotungamira yepasirese kugadzira yekurapa & yekushongedza mudziyo muChina, yakavambwa muna 1999, fekitori nharaunda 5000m2, 200+ vashandi, 8 mitsara yekugadzira, 18 madhipatimendi.
KES zvishandiso zvakawana CE, TUV Chiremba CE, FDA, CFDA, RoHS certification. Inosanganisira IPL SHR, Elight, 808nm Diode Laser, CO2 Fractional Laser, Q Chinja Laser, Muviri Kuponda, Cryolipolysis, Lipo Laser, HIFU, Kumba Kushandisa Aesthetic Midziyo etc.
Certification inosimbisa kuti michina yapasa bvunzo dzekuita uye bvunzo yehunhu, idanho rekutanga pamberi pemutengi kusarudza mudziyo unokodzera.
FSC (Yemahara Yekutengesa Chitupa), yeThailand, Indonesia, Siria, Egypt, Colombia, Costa Rica, Argentina ...
Yemahara Yekutengesa Chitupa (FSC) inoratidza kuti ekurapa michina inosangana nehutano uye chengetedzo zvinodiwa pamusika wekutengesa kunze, unogona kuunzwa kunze uye kutengeswa pamusika unounza.
R & D department rine makumi maviri mainjiniya, makore gumi neshanu 'ruzivo mune zvekurapa aesthetic zvigadzirwa, kugadzira zvishandiso zvitsva uye kugadzirisa zviripo zvigadzirwa.
12 wevanamakanika kuti vaongorore mhando yezvinhu uye muchina, 3rd chikamu QC yekuongorora timu yeVIP mutengi, kuendesa zvishandiso zvinosangana kana kupfuura zvinotarisirwa nevatengi.
10 Chikwata chevaMedhiya, zvipatara gumi nemashanu zvakabatana, zvinopa kuyedzwa kwekiriniki uye protocol yekiriniki.
Kuona kuti chishandiso chakachengeteka uye chinoshanda muvanhu.
KES Supply Chain inosangana zvakakwana ne ISO13485: 2016 yemhando yepamusoro sisitimu inodiwa, inobvumidzwa kupa ekurapa zvigadzirwa zvinogara zvichisangana nevatengi uye zvinoshanda zvinodzora zvinodiwa.
Mushure mebasa rebasa rinosanganisira mainjiniya gumi nemaviri, 7 * 24 maawa epamhepo sevhisi, inopa Chirungu, Russia, Spanish, Japan, Arabic, Chinese Mitauro kutaurirana. Solution nemanyorero kana mavhidhiyo anozopihwa mukati ma2 x24 maawa.
Dhipatimendi rekushambadzira rinosimudzira bhizinesi rako uye rinotyaira kutengesa kwarwo zvigadzirwa kana masevhisi. Inopa kutsvagirwa kunodiwa kuti uone vatengi vako uye vamwe vateereri.
Zvekushambadzira Zvishandiso zvinotsigira kumutengi, zvinosanganisira Bhurocha, Mavhidhiyo, Mushandisi Chinyorwa, Service Bhuku, Clinical Protocol uye Menyu Mitengo. Kuti uchengetedze nguva yemutengi uye mutengo wedhizaini.
KES inoteerera zvakanyanya kune Vatengi Mhinduro, isu tinoita zvakanyanya kugadzira yakanakisa yevatengi ruzivo, uye nekuvandudza zvishandiso zvedu nebasa.
Zvigadzirwa zveOEM & ODM zvevagoveri avo vanoda kugadzira yavo yega nemidziyo mitsva inosangana zviri nani nezvinodiwa nevatengi, uye inounza kunyange yakawanda purofiti nzvimbo.